Fampitahana ny sary eo anelanelan'ny Nexus 6P sy iPhone 6 | Androidsis
Iza no maka sary maivana ambany indrindra, ny Nexus 6P sa ny iPhone 6?
Hatramin'ny namoahana ny Galaxy Note 4 tamin'ny taon-dasa dia nisy zavatra tao amin'ilay sary miova amin'ny Android ho lasa tsara kokoa. Hitanay io fironana vaovao io amin'ny Samsung Galaxy S6 vaovao, ao amin'ny LG's G4 na ao amin'ny tsara tarehy Xperia Z5 izay napetraka ho tsara indrindra amin'ity lafiny ity ary izay mampiseho amintsika fa tsy ny sary tsara indrindra dia mifandraika amin'ny telefaona Apple, fa ankehitriny, amin'ny alàlan'ny finday misy ny Google OS dia azonao atao ny mahazo ireo sary tsara indrindra araka ny hita voamarina avy amin'ireo tranonkala teknika toy ny DxOmark.
Avy tao Imgur izahay dia afaka niditra amina andian-tsary izay mampitaha ireo izay namboarin'ny iPhone 6 amin'ireo an'ny Nexus 6P vaovao. Fisamborana marobe izay azo antoka fa afaka mamela anao hahagaga anao kely ny kalitao lehibe ananany ny fakantsary Nexus 6P. Zava-misy izay mety hahatonga antsika hanomboka hijery ireo finday Android ireo ho safidy tsara indrindra raha misy ny maniry ny sary tsara indrindra, farafaharatsiny, amin'ireo fakana sary nalaina tamin'ny toe-javatra maivana ireo.
Nexus 6P misy fakan-tsary faran'izay tsara
Avy amin'ny Nexus 6P azontsika karazana valiny rehetra avy amin'ny vondrom-piarahamonina mpampiasa sy avy amin'ny haino aman-jery samy hafa, fa ny didim-pitsarana farany kosa dia homarihin'ireo mpampiasa azy manokana rehefa te hiditra amin'ny fividianan'izy ireo izy ireo ka hamela azy io ho saika tsy feno intsony.
Si Nandany minitra vitsy i Google mampiseho ny hatsaran'ny fakantsary 6P dia natao ho an'ny zavatra iray, ary satria izy ireo dia nahafantatra izay an-tànany. Zavatra izay ho tsapan'ny mpampiasa rehetra rehefa manomboka maka sary amin'ny toe-javatra maivana izy ireo, toy ny aseho amin'ny sary ho hitanao amin'ity lahatsoratra ity. Ireo eo ankavia dia an'ny an'ny iPhone 6 ary ireo izay eo ankavan'ireo an'ny Huawei 6P.
Ilay mpampiasa izay vonona hamoaka ny sary, dia tsara vintana fa nanana Huawei 6P sy iPhone 6 noho izany asio manaraka ny iray ary tadiavo hoe iza no manolotra haavon'ny tabataba ambany kokoa sy ny fomba fiasan'io loko sy fotsy io amin'ny fomba tsara indrindra.
Ny fampitahana tsara indrindra dia ilay mampiseho ny ravina maina miaraka amin'ny roimemy izay azonao atao asongadino ny tsy fitovizan'ny fakantsary amin'ireto telefaona roa mahavariana ireto, ka ao amin'ny iPhone dia miseho ny tonony karamaina ary miseho rahona ny pitsopitsony, raha ao amin'ny Huawei 6p kosa dia mipoitra haingana ireo antsipiriany miaraka amin'ny famaritana mazava kokoa, mba hanolotra sahady ny loko izay omenao mazava kokoa ho an'ny fisamborana an'ity karazana ity, ao anatin'ireo toe-javatra maivana ireo.
Sary roa hafa manambara ny fahasamihafana misy dia ao amin'ny iray amin'ireo takelaka fifamoivoizana izay ahena ny taratra jiro amin'ny jiro amin'ny an'ny Huawei 6P, raha ny an'ny iPhone kosa dia hita taratra amin'ny fomba hafa mihitsy. fa setroka miseho amin'ny telefaona paoma manjavona ao amin'ny iray amin'ny Nexus, izay mazava kokoa ny loko, izay manome fifanoherana lehibe kokoa amin'ny ambaratonga ankapobeny.
Sary maromaro naseho manao ahoana ny fahombiazan'ny Google miaraka amin'ny Nexus azy ary satria nanjary nihatsara lavitra noho ny tamin'ny taona vitsy lasa izay ny sary amin'ny Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Iza no maka sary maivana ambany indrindra, ny Nexus 6P sa ny iPhone 6?
Diego Abella Rodriguez dia hoy izy:
Ao anaty kirihitra, mihemotra ve izy ireo? satria ny fomba fahitako azy dia toa maranitra kokoa amin'ny ankavia (iphone) izy fa tsy amin'ny ankavanana (nexus 6P).
Valiny tamin'i Diego Abella Rodríguez
Carls alvin dia hoy izy:
mazava ho azy ilay any ankavia manana tabataba be loatra
Valiny tamin'i Carls Alvin
Paompy Master dia hoy izy:
Mivadika ambony ambany izy ireo, rehefa manokatra ny sary ianao dia milaza hoe nexus 6p amin'ny ankavia. Mazava ny fahasamihafana
Mamaly an'i Bomba mastro
Efa milamina tsara ry zareo! Azafady! Araka ny lazain'i Bomba mastro dia mazava ny tsy fitovizany: =) Miarahaba anao!
Impaler dia hoy izy:
Raha jerena fa ny Nexus 6P dia telefaona iray amin'ity taona ity, heveriko fa ho ara-drariny kokoa raha toa ka natao tamin'ny iPhone 6S ny fampitahana fakan-tsary, izay telefaona ihany koa tamin'ny taona 2015. Mahaliana ny mahita ny fomba fiasan'ny fakantsary roa tonta. amin'ny daty mitovy
Valiny ho an'i Impaler
Fampianarana Android fototra: Androany, ny fomba fandefasana mailaka amin'ny Gmail
Xiaomi dia manomana hetsika amin'ny 19 oktobra ho avy izao, Xiaomi Mi5?